Lahatsoratra nataon'i Ian Cleary ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Ian Cleary
Alarobia, Novambra 2, 2016 Alakamisy 4 martsa 2021 Ian Cleary
Ny tena izy dia tsy mivarotra amin'ny fantsona media sosialy matetika ianao fa afaka mamokatra varotra avy amin'ny media sosialy raha mampiditra dingana farany hatramin'ny farany. Ny rafitry ny PRISM 5 dia dingana iray azonao ampiasaina hanatsarana ny fiovam-po amin'ny media sosialy. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny rafitra 5 izahay ary handingana ireo fitaovana ohatra azonao ampiasaina amin'ny dingana tsirairay amin'ny dingana. Ity misy PRISM: Hananganana ny PRISM anao
Ny blôgy dia mety ho loharanom-pifamoivoizana lehibe mankany amin'ny tranonkalanao, saingy mandany fotoana ny famoronana lahatsoratra bilaogy ary tsy mahazo ny valiny tadiavintsika foana isika. Rehefa manao bilaogy ianao dia te-hahazo antoka fa mahazo sanda ambony indrindra amin'izany. Amin'ity lahatsoratra ity dia nanondro fitaovana 5 izahay izay hanampy amin'ny fanatsarana ny valinao amin'ny fanaovana bilaogy, mitarika fifamoivoizana bebe kokoa ary, amin'ny farany, ny varotra. 1. Mamorona sary an-tsary mampiasa sary Canva